तपाईलाई थाहा छ हिमोफिलिया रोगबारे ? सयममै उपचार नपाए यसरी जान्छ ज्यान, यस्तो हुन्छन् लक्षण | Rajmarga
तपाईलाई थाहा छ हिमोफिलिया रोगबारे ? सयममै उपचार नपाए यसरी जान्छ ज्यान, यस्तो हुन्छन् लक्षण
कुनै कुराले शरीरमा घाउ बनायो भने केहीबेर रगत बग्छ र बन्द हुन्छ, तर कतिपय मानिसका साथ यस्तो हुँदैन। हिमोफिलियामा रगत बग्न रोकिँदैन । यसबाट ज्यान जाने खतरासमेत हुन्छ ।
१७ अप्रिल हिमोफिलियाया डे हो, जुन यो रोगसम्बन्धी जागरुकता फैलाउनका लागि मनाउने गरिन्छ ।
यो एउटा अनुवांकिश रोग हो, जुसमा रगत थोपा जम्न बन्द हुन्छ ।जब शरीरको कुनै हिस्सामा जोट लाग्छ तब रगत जम्न आवश्यक घटक रगतमा रहेको प्लेटलेट्ससँग मिलेर त्यसलाई गाढा बनाइदिन्छ । यसबाट रगत बग्न आफै रोकिन्छ ।
जुन मानिसलाई हिमोफिलिया छ, उनीहरुमा थोपा बनाउनेवाला घटक निकै कम हुन्छ । यसको अर्थ हो कि उनीहरुको रगत बढी समयसम्म बगिरहन्छ ।
भारतको गंगाराम अस्पतालका मेडिसिन कन्सल्टेन्ट डाक्टर अतुल गोगियाले भने–यो रोग अधिकांश आनुवांशिक कारणबाट हुने गर्दछ अर्थात आमाबाबुमध्ये कसैमा यो रोग छ भने उनीहरुका सन्तानमा पनि हुन सक्दछ । अरु कारणबाट यो रोग लाग्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ।
‘हिमोफिलिया दुई प्रकारको हुन्छ । हिमोफिलिया ‘ए’ मा फ्याक्टर ८ को कमी हुन्छ र हिमोफिलिया ‘बी’ मा घटक ९ को कमी हुन्छ । दुवै नै रगतको थोपा बन्नका लागि जरुरी छ ।’
डाक्टर अतुलका अनुसार यो दुर्लभ रोग हो ।हिमोफिलिया ‘ए’ १० हजारमध्ये एक जनामा पाइन्छ र ‘बी’ ४० हजार जनामा एकमा पाइन्छ । तर यो रोग निकै गम्भीर छ। र, यस विषयमा जागरुकता निकै कम छ।
यसको लक्षण हल्कादेखि निकै गम्भीरसम्म हुन सक्दछ । यो रगतमा रहेको थोपाको स्तरमा निर्भरगर्दछ । लामो समयसम्म रक्तश्रावको अलावा पनि यो रोगका अन्य लक्षण पनि हुन्छन्ः
–नाकबाट लगातार रगत बग्नु ।
–गिजाबाट रगत निस्कनु ।
–छाला सजिलैसँग ताछिनु ।
–शरीरमा आन्तरिक रक्तश्रावका कारण जोड्नीहरुका पीडा हुनु ।
–कतिपय अवस्थामा हिमोफिलियामा टाउकोभित्र पनि रक्तश्राव हुन्छ । यसमा निकै तिब्र टाउको दुख्ने, गर्दनमा असहज भएर उल्टी हुन्छ । यसका साथै धमिलो देख्नु, बेहोशी र अनुहारमा प्यारालाइसिस हुनुजस्तो लक्षण पनि हुन्छ ।
हिमोफिलियाको तीन स्तर हुने गर्दछ ।हल्का स्तरमा शरीरमा थोपा बनाउने घटक ५ देखि ५० प्रतिशतसम्म हुन्छ । मध्यमस्तरमा योघटक १ देखि ५ प्रतिशत हुन्छ र गम्भीरस्तरमा १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन्छ ।
यो रोग बालबालिकामा जन्मैबाट पनि हुन सक्दछ। कतिपय अवस्थामा जन्मपछि मात्रै यसबारे थाहा हुन्छ । तर हिमोफिलिया मध्यम र गम्भीरस्तरको छ भने बाल्यकालमा आन्तरिक रक्तश्राव हुँदा यसका केही लक्षण देखिन्छ ।
तर, गम्भीरस्तरको हिमोफिलियामा खतरा निकै बढी हुन्छ । कतै जोडले ठोक्किदा पनि आन्तरिक रक्तश्राव सुरु हुन सक्दछ।
तर, यदि रोग हल्कास्तरमा छ भने यो सजिलै थाहा पाउन सकिँदैन । उदाहरणका लागि जब बच्चाको दाँत निस्कन्छ र रगत बग्न बन्द हुँदैन तब यो रोग लागेको थाहा हुन्छ । कतिपय अवस्थामा घुँडामा चोट लाग्छ र रगत भित्रै जम्छ, जसबाट घुँडामा सुजनजस्तो आउँछ ।
कुनै समय हिमोफिलियाको उपचार कठिन थियो । तर अब घटकहरुको कमी भए यसलाई बाहिरबाट इन्जेक्शनको माध्यमबाट हाल्न सकिन्छ । यदि रोगको गम्भीरता कम छ भने औषधिबाट पनि उपचार गर्न सकिन्छ ।
यदि आमाबाबुलाई यो रोग छ भने बच्चामा आउने सम्भावना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पहिला नै यसको जाँच गराउनु राम्रो हुन्छ।
यस्तै भाइबहिनीमध्ये कुनै एकलाई छ तर अर्कामा त्यतिबेलै लक्षण छैन भने पहिला नै लक्षण देखिएको छैन भने भविष्यमा पनि यो रोग देखा पर्ने सम्भावना कायमै रहन्छ ।
डाक्टर अतुल भन्छन् कि अधिाकांश मामिलामा घटक ८ को कमी पाइएको छ। यस्तोमा पहिला पत्ता लगाइन्छ कि शरीरमा कुन घटकको कमी छ। अब बजारमा यसप्रकारका घटक उपलव्ध छ, त्यसैले रोगको उपचार सहज भएको छ। समयमै यो रोग पत्ता लगेको खण्डमा इन्जेक्शनको माध्यमबाट उपचार गर्न सकिन्छ । बीबीसी हिन्दी
Previous post: प्रमोद खरेल र कविता शिवाकोटीको आवाजमा “टालाटुली बाटुली ” भिडियो सहित
Next post: आँखाअगाडि अँधेरो छाउँछ वा रिङ्गटा लाग्छ ? ध्यान दिनुस्, यस्तो समस्या हुन सक्छ
लमजुङको दोर्दीखोलामा आएको बाढीमा चार जनाको मृत्यु, कयौ बेपत्ता
सरकारले तोकेको भन्दा लाखौं बढी असुल्दै मेडिकल कलेज